"Amazing PC Bundle " ပရိုမိုးရှင်း - Shwe Lamin Nagar Group of Companies
Shwe Lamin Nagar Group of Companies > Promotion > “Amazing PC Bundle ” ပရိုမိုးရှင်း
“Amazing PC Bundle ” ပရိုမိုးရှင်း
“Desktop တွေ ၊ Monitor တွေအတွက်ရော “ဆိုပြီး ခဏခဏလာတောင်းဆိုနေကြလို့ ဆန္ဒတွေပြည့်ဝသွားအောင် ဒီ “Amazing PC Bundle ” ပရိုမိုးရှင်းလေးကိုပြုလုပ်ပေးလိုက်ပါပြီ “ Amazing PC Bundle “ ဆိုတာ ? အရည်အသွေးအကောင်းဆုံး Acer Desktop နဲ့ Monitor တွေထဲက သတ်မှတ်ထားတဲ့ မော်ဒယ်တွေကို တွဲဖက်ဝယ်ယူသူတိုင်းအတွက် Special Cash back တွေပြန်အမ်းပေးသွားမယ့် ပရိုမိုးရှင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
Aspire XC-885 ( i3, i5 ,i7) 8th gen Onboard/Graphic Desktop ကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ Acer Monitor တစ်မျိုးမျိုးနဲ့ တွဲပြီး ဝယ်မယ် ဆိုရင် Cash back 15 USD
Aspire TC-885 ( i3, i5 ,i7) 8th gen Onboard/Graphic Desktop ကို 18.5” Acer Monitor တစ်မျိုးမျိုးနဲ့တွဲပြီးဝယ်မယ်ဆိုရင် Cash back 30 USD
Aspire TC-885 ( i3, i5 ,i7) 8th gen Onboard/Graphic Desktop ကို 19.5”နဲ့အထက် Acer Monitor တစ်မျိုးမျိုး နဲ့တွဲပြီး ဝယ်မယ် ဆိုရင် Cash back 40 USD ဆိုပြီးအရမ်းတန်တဲ့ Cash back တွေပြန်ပေးထားတာကြောင့် PC Bundle စုံလိုက် ဝယ်မယ့် သူတွေအတွက်လုံးဝကိုတန်တဲ့ Promotion ပါပဲ.. Promotion မှာပါတဲ့ မော်ဒယ်တွေက များနေလို့ ရှုပ်ပြီးနားမလည်ဘူးဆိုရင်လည်း Shwe Lamin Nagar Co., Ltd.
ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၂၅၃၃၈၈၈၈၅ ၊ ၀၉-၈၉၈၂၂၅၅၈၉ ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
အရေးကြီးတာတစ်ခုပြောဖို့ကျန်သွားတယ်..ဘာလဲဆိုတော့ဒီ ““Amazing PC Bundle ” ပရိုမိုးရှင်းလေးကို နိုဝင်ဘာ ၉ ရက်နေ့ကနေ ၃၀ ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်ပေးထားပြီး အမြို့မြို့အနယ်နယ်မှာရှိတဲ့ Shwe Lamin Nagar ရဲ့ Dealer/Reseller ဆိုင်တွေမှာ ဝယ်ယူ ခံစား လို့ရပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပါ..
*Desktop & Monitor Warranty*
3 Years Parts & Service